GOYNTA SILVERWEED: SHARAXAADDA, QAYBINTA, HANTIDA FAA'IIDADA LEH, CUNTOOYINKA IYO KA HORTAGGA CAGAHA GOOSE - SOOSAARKA DALAGGA
Waa maxay cagaha waxtarka leh ee khatarta leh (Goose Potentilla)
Goosashada Silverweed (Magaca qaranka ee warshadu waa cagaha goose) ayaa muddo dheer loo yaqaanay sifooyinka bogsashada. Farshaxanka iyo daawada dhaqameedyada oo dhan qaybo ka mid ah warshadkan si firfircoon ayaa loo isticmaalaa - laga bilaabo rhizomes ilaa abuurka. Faa'idada walxaha badan ee faa'iido u leh jidhka, duufaantan ayaa leh xanuun, xanuun, bogsasho-bogsiin jidhka, waxay ka caawisaa xannuunka caadada iyo casiraadyada. Potentilla Potentilla waxay ka heshay isticmaalka karinta. Waad ku mahadsan tahay sonkorta iyo burcadka ay ku jiraan, waxay si firfircoon loo isticmaalaa sidii lo'da iyo saladh. Iyo si aad u hesho cagaha gaaban ee aan cagaha lahayn wuxuu noqon karaa meel kasta oo meel kasta ah.
Geedkan dilka ah wuxuu leeyahay hindhis iyo daba dheer. Caleenta rhizomes ee qarxa waxaa loogu talagalay in lagu soo afjaro afkoda. Caleenta dhirta waxay ku taalaa xididka, waxay leeyihiin caleenta caarada leh iyo caleemo caday. Ubaxyada potentilla waa huruud cad, hal, qaab joogto ah, cabbirka ubaxa qiyaas ahaan laba sentimitir. Waxay ku yaalaan caws dhaadheer, waxay leeyihiin hal shaashad shan ah iyo laba koob, waxay leeyihiin dhadhan jilicsan oo jilicsan. Geedka ubaxu wuxuu bilaabmaa horraanta May ilaa dhammaadka Agoosto. Miraha ayaa ku jira qaabka abuurka caadiga ah, u bislaadaan dhamaadka August - horraantii Sebtembar. Geedkan waxaa sidoo kale loo yaqaana handiga, dubrovka ama gacanta martynov.
Ma taqaanaa? Kii ugu horreeyey ee awood u lahaa in cilmi ahaan loo hubiyo isticmaalka xawaashka daawooyinka ahaa "aabaha" ee daawada cilmiga casriga ah - Hippocrates (460-377 BC). Shaqadiisa 236 dhirta ayaa lagu sharraxay. Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa si guul leh loogu isticmaalay daawada dhirta maanta.
Warshadani waxay si weyn uga muuqatay Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Dabiiciga ah wuxuu jecel yahay ciid qoyan oo leh dhoobo sare. Cawska ugu caansan ee aagga furan, waxaa badanaa laga heli karaa cawska, biyo, cawska.
Waxyaabaha kiimikada ah iyo guryaha farshaxanka
Qalabka daaweynta iyo ka hortagga marka la isticmaalayo Goose cinquefoil sabab u ah ka kooban kiimikada. Jiritaanka dhirta geedka waxaa ku jira ilaa 30% tannins. Waa jiritaankooda in deyn badani ay ku leedahay ficilkiisa ka hortagga. Taniinada waxay abuuraan filim difaac oo ilaaliya oo u adeega sida caqabad ku ah waxyeellada unugyada.
Sidoo kale waxaad ku baran kartaa geed, cad, iyo norweji.
Dhirta lafteedu waxay ka kooban tahay miro iyo istaarijiyo. Choline, Fitamiin C, Acids organic iyo ashyaa dufan - waxyaabaha ugu waxtarka badan ee jidhka, waxyaabaha uu ka kooban yahay dhirtu waxay ka caawisaa inay la dagaallanto tiro cuduro ah. Thanks to arrintan maaddooyinka waxtar leh, dhirta ay leedahay saamayn bogsiin ah iyo boogta boogta. Maraqyada, shaaha iyo tinctures ayaa loo diyaariyey asalkiisa, waxay leeyihiin saameyn anticonvulsant iyo saameyn raadraac ah, xanuunka yareynaya.
Cunnooyinka caanka ah ee daawada dhaqameed
Aabaheennu waxay bartay waqti dheer si ay u muujiyaan sifooyinka bogsashada cawska, cagaha labka ah, sameynta shaaha, jajabyada iyo fusada.
xannuunka caadada dumarka;
cudurada marinka mindhicirka.
Si aad u sameyso shaaha, waxaad u baahan tahay 2 qaado oo ah xawaashka la jarjarey oo ku shub hal galaas oo biyo ah karkarin. Toban daqiiqo ka dib, cadaadis. Cabbitaanka waxaa la qaataa kulul, iyada oo aan sonkor lahayn, laba koob oo maalintii.
Waa muhiim! Marka cawska lagu daro shaaha, roodhida ama liinka macaamilkiisa saameynteeda faa'iido leh ayaa si weyn u kordheysa.
boog-garka iyo gasacad duodenal ah;
Maraq dufan waxaa loo isticmaalaa dhuun xanuun, stomatitis ulcerative iyo gingivitis. Decoction Recipe ee rhizomes:
5-10 g of qalab ceeriin ku shub laba koob oo biyo karkaraya, ka dibna karkariyo nus saac. Qabooji maraq iyo qaado laba saacadood kasta. Hal qadar ayaa hal qaado ah.
Baro waxyaabo faa'iido leh avran, althea, sedge, qoryaha iyo xajmiga.
Dib udajinta geedeed:
Karkari 20 g oo ah walax cayriin ah oo 200 ml oo biyo ah. U diyaari laba saacadood. Cadaadisna qaado rubuc koobi 3-4 jeer maalin kasta cuntada ka hor.
Recipe for decoction ee abuurka:
5-10 g oo ah wax cayriin ah si aad u kariso 200 ml oo caano ah 5 daqiiqo. Cadaadiska maraq iyo 125 ml laba jeer maalintii, subaxda iyo fiidka.
Casiirka waxtar u leh:
xanuunka dillaaca ee ilkaha iyo xoojinta cirridka;
daaweynta qaaxada iyo tiibishada sambabada;
daaweynta hernia iyo prolapse ilmo-galeenka.
Waa muhiim! Cagaha Goose - qalab aan waxtar lahayn ee daaweynta cudurrada 'labka'. Cudurada qanjirka 'prostate' iyo kaadiheysta, kuwaas oo aan fiicnayn daaweyn dhaqameed, dib u noqoshada marka la isticmaalayo daaweynta dadkan.
Recice Juice: Si aad u diyaariso casiirka, cawska waa in la goosto, la goostaa inta lagu jiro ubax. Waxay ku qallajisay biyo karkaraya oo lagu jajabiyey blender ama Booqday Furimaha Dagaalka hilibka. Cabbitaanka soo dhalaalay ayaa la gooyaa iyada oo loo maro cheesecloth waxaana loo oggol yahay inay istaagto 10-15 daqiiqo. Ka dibna biyaha ayaa lagu daraa juuska, kuna salaysan 1: 2 saamiga. Qaado casiir afar jeer maalintii kahor cuntada. Qiyaas hal ah waa hal saddexaad oo ka mid ah galaas.
Faleebo dhirta waxaa loo isticmaalaa:
cudurrada xuubka afka;
qalinjebinta xayawaanka iyo faraantiga;
Recipe for galiyey:
Waa lagama maarmaan in la qaato hal qaado oo ah walxo cayriin, ku rid weel weel ku shub 200 ml oo biyo ah. Iska ilaali inaad u baarto 2 saacadood. Ka dib markii in, faleebo waa in la sifeeyo iyo qaado laba saacadood kasta, laba qaado. Faleebo ee dhirta iyo rhizomes:
20 g oo caws oo leh rhizomes ayaa lagu shubay litir biyo ah karkaraya. Ka tag saacad, ka dibna xaddid. Faleebo waxaa la qaadaa laba jeer maalintii, 250 ml.
Ma taqaanaa? Waa geedo in bani-aadmigu uu ku leeyahay muuqaalka kicinta ugu horeysay ee antiseptics iyo antipiretic. Tusaale ahaan, barkin yar, tusaale ahaan, waxay ahayd ilaha keliya ee salicylic acid muddo dheer, sidaas oo kale ayaa loo ciyaaraa doorka aspirin nala yaqaan.
Waa lagama maarmaan in lacag la qaado iyada oo ku saleysan silverweed oo leh baaritaannada soo socda:
colitis oo leh caloosha antonic;
cudurada habka jimicsiga;
Dhibaatooyinka murugada leh.
Faahfaahinta Potentilla Goose lafteeda ayaa iska hadlaysa: walxaha ay ku jiraan halabuurka dhirta waxay suurtogal u tahay in lagu daweeyo cudurro badan oo kala duwan, ku dhowaadan aan walwal ku haynin khilaafka suurtogalka ah. Inkastoo tan, ka hor inta aan la cabin shaah, faleebo, casiir ama maraq ah Potentilla, waa lagama maarmaan in la tasho dhakhtar.